जति भए पनि नपुग्ने ? « Jana Aastha News Online
जति भए पनि नपुग्ने ?
प्रकाशित मिति : २४ पुष २०७३, आईतवार ०७:५८
श्री वीरेन्द्र आर्मी अस्पताल छाउनीका ठेकेदार बाबुराम कोइरालालाई जति भए पनि नपुग्ने ? थोत्रे साइकल चढेर आउँदाको सहनशीलता, इमनदारी आज कता गयो ? पैसा कमाउनुस् इमानदार बनेर । नेपाल आर्मीको पैसाले ३५ लाखको गाडी किन्नु भयो ।
अत्याधुनिक घर जताततै बनाउनुभयो पटके जागिर र आर्मी छाडेको सालोलाई सहायक बनाई घर बनाइदिनुभयो तर अति गर्नु– अत्याचार नगर्नू भन्ने हाम्रो सुझाव हो । १० को सामान सय रुपैयाँ राखेर पैसा खुवाई, नक्कली बिल बनाएर होइन कि काम लाग्ने सामान ल्याउनुस् ।
कसैले कुरा काट्ने छैन । मेजर रामबहादुर थापा कोठामा बसेर नक्कली बिल बनाउने, हु. दधिराम क्यान्टिन र निर्माण ठेकेदारलाई पानी दिएर कमिसन खाने अस्पताललाई पनि सफा राखी सिओबाट हुन गइरहेको राम्रो कामलाई सहयोग पु¥याउनुस् । तालिम केन्द्रका जमदार मानबहादुर महरालाई महिला शिक्षार्थीप्रति यौनपिपासु नहुन सुझाब छ ।